News - Solar Power System Fires Na gbawara Rooftop Isolator switches
Enweela ọtụtụ ọkụ na New South Wales na izu gara aga ma ọ bụ karịa metụtara sistemụ ike anyanwụ - ma ọ dịkarịa ala abụọ na-eche na ọ bụ ndị na-eme ka ndị na-ekewapụ ụlọ na-ebute.
Nyaahụ, Ọkụ na Nnapụta New South Wales kwuru na ọ gara otu ihe mere n'ụlọ na Woongarrah na Central Coast mgbe onye na-akpọ oku ugboro atọ kwuru anwụrụ ọkụ na-esite n'elu ụlọ.
"Ndị ọrụ ọkụ si Hamlyn Terrace na ụlọ ọrụ ọkụ Doyalson bịarutere ebe ahụ obere oge ka nke ahụ gasịrị wee nwee ike imenyụ ọkụ ngwa ngwa ma hụ na ọ agbasaghị n'ihu," kwuru Fire and Rescue. "FRNSW si Fire Nchọpụta na Research Unit ugbu a na-arụ ọrụ iji gosi ihe kpatara nke ọkụ, nke a kwenyere na ọ malitere ke iche iche mgba ọkụ."
Na Disemba 30, a na-akpọ ndị ọrụ mgbanyụ ọkụ na ndị uwe ojii na adres dị na Newcastle na mpụga Bar Beach mgbe ha kọchara akụkọ banyere otu ụlọ elu igwe na-ere ọkụ. Ọzọkwa, e debere ọkụ tupu nnukwu mmebi ọ bụla nwere ike ime. Ekwughi ihe kpatara ya.
Fire na Nnapụta NSW kwuru na afọ gara aga, ọkụ metụtara ọkụ ọkụ amụbawo okpukpu ise na afọ ise gara aga, mana enyeghị nọmba ọ bụla. E tinyela ihe karịrị sistemụ ike igwe 600,000 na New South Wales, ebe ọ bụla ngwa eletriki zuru ebe niile ga - eme - mana ekwesighi ịnabata nke a ma ọ bụrụ na enwere ohere imeziwanye.
FRNSW ekwuola na mbụ ndị na-agbanwe ihe ntụgharị ewepụtala ihe dịka ọkara nke ọkụ ọkụ ọkụ na steeti. Ọ bụ ezie na ekwesighi ịkọ oke nke ndị na-ekewapụ ụlọ n'elu ụlọ, ọ ga-abụ na e nyere ọtụtụ n'ime ha ndekọ ndekọ nke ngwaọrụ ndị a nwere nsogbu.
Ihe ngbanwe onyonyo DC n'elu ụlọ bụ ihe eji aka ejiri arụnyere n'akụkụ akụkụ nke anyanwụ na-enyere aka iji mechie DC dị ugbu a n'agbata usoro na onye ntụgharị anyanwụ. N'ụzọ na-emegide onwe ya, ebubere ya ka ọ bụrụ usoro nchekwa nchekwa ọzọ yana ọ bụ ihe achọrọ maka sistemụ ike anyanwụ niile na Australia. Mana ọ dị anyị ka ọ bụ naanị obodo ka chọrọ ojiji ha.
Ọtụtụ ndị na-etinye anyanwụ na-eleda anya ịnwụnye ndị na-ekewapụ ihe mkpuchi DC na ndị na-agagharị agagharị iji wepu ihe achọrọ na ụkpụrụ Australia - nke ahụ enweghị ike ịbịa n'oge. E nwekwara ihe a na-asọ iji kpochapụ ndị kewapụrụ iche na mgbidi; kama na-achọ ka onye na-ekewapụ ihe dị iche iche abanye n'ime ihe ntụgharị anyanwụ.
Ihe ndị a bụ ọganihu ole na ole enwere ike ịme - ọzọ bụ ndị nwe ụlọ na - enyocha usoro ha.
Ezi mma DC isolator switches ọma arụnyere na n'ụzọ dị irè-echebe site shroud bụ n'ozuzu mma. A shroud bụ ihe ọzọ achọrọ nke dịla adị nwa oge na onye na-ekewapụ iche n'ihe mere ụnyaahụ apụtaghị na ọ nwere. Ikekwe nrụnye ahụ gosipụtara ihe a chọrọ, mana nhazi ahụ n'ozuzu ya yiri ka ọ dị ntakịrị.
Nchedo ọkụ bụ ihe ọzọ dị mkpa maka ịhọrọ ezigbo nhazi anyanwụ. Mana n'agbanyeghị akụrụngwa na nrụnye nrụnye ma nye ọnọdụ ọjọọ ọnọdụ dọkụrịta DC isolator na ihe ndị ọzọ nke sistemụ ike anyanwụ ga-atachi obi ruo ọtụtụ afọ, ọ dị mkpa ịnwe nyocha na nyocha usoro emere kwa afọ ole na ole.
Michael jidere anyanwụ ike ahụhụ mgbe ịzụta mmiri ka cobble ọnụ obere anya-okporo PV usoro ke 2008. Ọ na-akuko banyere Australian na mba anyanwụ ike ozi ọma kemgbe.
A sị ka e kwuwe, ọ bụ ya mere ha ji tinye iwu nzuzu iji tinye ndị na-ekewapụ DC n'elu ụlọ, ka ha wee nwee nsogbu, ọ bụghị ya?
Ọ dị ka ịchọrọ usoro mmiri ọkụ iji mụta ma gbasaa legionella, site na igbochi mmiri ọkụ na ndị na-ekpo ọkụ mmiri.
Aghọtaghị n'ezie ezi uche nke DC isolator ga-anọ n'elu ụlọ. Onu ogugu mmadu adighi ebili ubu iji wepu ogwe ya n'ihi ihe obula. Ndị na-ekewapụ onwe ha kwesịrị ịnọ n'ọkwa dị nfe.
Enwere m sistemu atọ nke igwe. Nke mbụ arụnyere na 2011. Ọ dịghị onye na-ekewapụ DC na pọọlụ mana enwere onye nnọchibido DC na-esote ntụgharị.
Ejiri usoro nke atọ na 2018, o nwere ndị na-ekewapụ DC n'elu ogwe elu ụlọ yana ịnọ n'akụkụ onye ntụgharị (ọnụọgụ abụọ nke ndị na-ekewapụ DC).
Shroud ahụ na-egbochi anyanwụ ngbanwu DC isolator nke na-enyere aka ịkwụsị ya ọkụ oke ọkụ ma gbochie mbibi UV. Ọ na-egbochi mmiri ozuzo kachasị njọ na ya.
ADELS NL1 Series DC Isolator Switches ka etinyere na 1-20KW obibi ma ọ bụ azụmaahịa fotovoltaic sistemụ, tinye n'etiti modul fotovoltage na inverters. Oge ịbata bụ ihe na-erughị 8ms, nke ahụ na-eme ka usoro mbara igwe dị mma karị. Iji hụ na ya kwụsiri ike na ogologo ọrụ ndụ, anyị na-mere site na mmiri na kacha mma. Max voltaji ruru 1200VDC. Ọ na - ejide ndu n'etiti ngwaahịa ndị yiri ya.
Post oge: Jan-12-2021